အကောင်းဆုံးစက်ဘီးတံဆိပ်ကဘာလဲ - စက်ဘီး
အဓိက > စက်ဘီး > စက်ဘီးပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ - ပုံမှန်အဖြေများနှင့်မေးခွန်းများ
စက်ဘီးပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ - ပုံမှန်အဖြေများနှင့်မေးခွန်းများ
သင် ၀ ယ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးစက်ဘီးကဘာလဲ။ အွမ် တကယ်တော့စက္ကန့်ပိုင်းပဲ။ အလေးအနက်ထားစဉ်းစားရမယ့်တကယ့်ကိုခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းပဲ။
တကယ်တော့စက်ဘီးကြီးကိုရှာရတာတကယ်ခက်တယ်၊ တကယ်တော့အကောင်းဆုံးစက်ဘီးကမင်းကိုပဲအားကိုးလို့ပဲ။ အကောင်းဆုံးစက်ဘီးကဘာလဲဆိုတာမေးမယ့်အစား၊ မင်းအတွက်အကောင်းဆုံးစက်ဘီးကိုဘယ်လိုဝယ်မလဲ။ ကောင်းပြီ၊ သင်၏အကောင်းဆုံးစက်ဘီးကို ၀ ယ်ယူရာတွင်ပထမဆုံးအချက်မှာသင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီသင့်တော်ကြောင်းသေချာစေရန်ပထမဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။ အခုဒီမှာဒီမှာဘားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြကုန်အံ့။
လမ်းပေါ်ထွက်ချင်ရင်တောင်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဝယ်ဖို့စဉ်းစားပါ။ ယခုစက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်ကျောက်စရစ်စက်ဘီးကဲ့သို့သောစက်ဘီးစီးခြင်းသည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်သဖြင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဘက်စုံသုံး။ လမ်းဘေးတွင်ပျော်စရာကောင်းသည်။ အစစ်အမှန် adrenaline အားသွင်း။ ရသောလမ်းဘေးခရီးစဉ်များအတွက်မူ၊ တောင်ကြီးတောင်ငယ်ပေါ်ရှိတာယာများသည် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသည်။
သငျသညျဖုများ, ကျောက်များနှင့်အမြစ်များမှနည်းပါးလာဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်သင်ပိုမိုအဆင်ပြေမောင်း, ပိုမြန်မောင်းနှင့် li လည်းလျော့နည်း။ ပြားချပ်ချပ်တာယာရဖို့ kely ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအခါထိုကျောက်စရစ်သို့မဟုတ်စက်ဘီးစီးစက်ဘီးနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ ကောင်းပြီ၊ သူတို့ကစက်ဘီးစီးတာနဲ့တူတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီစက်ဘီးထက်စီးရတာတစ်နာရီနှေးတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ဒါကမင်းအတွက်အရေးမကြီးသလိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ကလမ်းပေါ်မှာပြေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြိုင်ကားမောင်း ၀ ယ်ဖို့လိုတယ်။ အခြားအရာအားလုံးပေမယ့်ဒီစက်ဘီးပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပိုကြီးတဲ့တာယာတွေကိုပွေ့ဖက်၊ စူးစမ်းလေ့လာပါ၊ ပုံမှန်အားဖြင့်သင်ဟာပုံမှန်အားဖြင့်ဘားတိုင်နှင့်မထိရသည့်လမ်းများကိုစီးနင်းလိုက်ပါ၊ ၎င်းသည်ထိတွေ့မှုအတွက်အလွန်အားကောင်းသည့်အတွက်ဆောင်းရာသီတစ်လျှောက်လုံးသင့်ကလေး၏ထိုင်ခုံတွင်ကလေးထိုင်ခုံဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်ပျော်ရွှင်စွာမောင်းနိုင်သည်။ ဒါဟာတကယ့်အလုပ်စွမ်းအား
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အမှန်တကယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်ပြိုင်ကားဆိုင်ကယ်ဝယ်ခြင်းသည်သဘာဝကျပါသလား။ လမ်းအိုးဆိုင်ကယ်ဝယ်ဖို့အချက်တစ်ချက်ကျိန်းသေရှိသည်။ သူတို့ကပိုမြန်တယ်၊ ဆိုလိုတာကမင်းရဲ့အိတ်လို့တောင်မှ y ကိုဆက်သွားဖို့ပိုလွယ်တယ်။ သူတို့ဟာပိုပြီးတုန့်ပြန်မှုပိုရှိတယ်။
၎င်းသည်အားကစားကားအနည်းငယ်သာဖြစ်သော်လည်းစျေးနှုန်းအရပြိုင်ကားစက်ဘီးများစွာသည်သင်ထင်သည်ထက်ကျောက်စရစ်ကိုစီးနင်းနိုင်စွမ်းပိုရှိသည်။ နောက်အရေးကြီးသည့်အချက်တစ်ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးစက်ဘီးကိုရှာရာတွင်သင့်တော်သောမထိုက်မတန်၊ အခုဆိုရင်သင်ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ဘီးနဲ့ရင်းနှီးဖို့မလိုအပ်တော့ပါ။
အကယ်၍ သင်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်စတိုးဆိုင်တစ်ခုမှ ၀ ယ်လျှင်သူတို့သည်သင့်တော်သောအရွယ်အစားကိုရှာဖွေသင့်သည်။ မှန်ကန်စွာဒီတော့ကုန်းနှီးအမြင့်ကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကညှိဖို့အရမ်းလွယ်တယ်။
ဒါကြောင့်လက်ျာစက်ဘီးကိုပိုပြီးသြဇာသက်ရောက်စေတာကလက်ကိုင်အကန့်အသတ်နှင့်သူတို့အမြင့်လည်းပါသည်။ ဒါကြောင့်မင်းတို့ထက်ပိုမြင့်တဲ့အနေအထားရှိရင်မင်းကိုပေးတဲ့စက်ဘီးတစ်စီးဝယ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်တစ်စီး၊ ဒါပေမယ့်သင်ကပိုရှည်ပြီးပိုကျယ်တဲ့နေရာကိုပိုနှစ်သက်မယ်ဆိုရင်ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့စက်ဘီးကိုမသက်မသာတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာပိုပြီးရိုးရှင်းတဲ့၊ ပေါ့ပါးတဲ့သို့မဟုတ်မြားပုံစံပုံသဏ္bikeာန်ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်။ အတိတ်ကာလ၌ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအားလုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးစက်ဘီးတစ်စီး ၀ ယ်သောအခါအားလုံးအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ပေါ့ပါးစက်ဘီးကပိုမြန်တယ်။
လေခွင်းစက်ဘီးတစ်စီးမလာမချင်းသူတို့ဟာတကယ်ပဲဖြစ်ခဲ့တာပါ၊ နည်းပညာပိုင်းအရသူတို့ကစီးနင်းနေတဲ့အခြေအနေအားလုံးမှာပိုပြီးမြန်လာပါတယ်။ သို့သော်သူတို့သည်လည်းစျေးကြီးကြသောကြောင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချခြင်းသည်သင်၏အဓိကစဉ်းစားသုံးသပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ ငါပြောခဲ့သလိုပေါ့ပါးတဲ့စက်ဘီးတွေဟာပိုမြန်ပြီးတုန့်ပြန်မှုပိုမြန်တယ်၊ (ပျော်ရွှင်သောဂီတ) ရွေးစရာလေးခုရှိပါသည်။
သံမဏိ၊ တိုက်တေနီယမ်၊ လူမီနီယမ်နှင့်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများ။ မည်သူမဆိုကြီးမားသောစက်ဘီးသို့တည်ဆောက်နိုင်ပြီးလူတိုင်းကသူတို့၏ထောက်ခံအားပေးသူများရှိလိမ့်မည်။ နိမ့်သောဘတ်ဂျက်နှင့်အတူ, frameset အလေးချိန်သင့်ရဲ့အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒီတော့စျေးပေါတဲ့သံမဏိဟာတော်တော်လေးလေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာတကယ်ကိုခက်ခဲပြီးတကယ်ခိုင်မာတယ်၊ အလူမီနီယမ်သည်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးကာဗွန်ဖိုင်ဘာ၊ ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုပေါ့ပါးသည်။ မြင်းစီးသူရဲများအနေဖြင့်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာဘောင်သို့မြန်နိုင်သမျှမြန်နိုင်သမျှမြန်အောင်ကြိုးစားသော်လည်းငါတူညီသောစျေးနှုန်းအတွက်အလူမီနီယမ်ဘီးဆိုင်ကယ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး၊ ထိုအရာများစွာသည်ဆားကစ်သို့ရောက်သည်ဟုငါထင်လေ့ရှိသည်။ ဈေးကြီးသောဂီယာများသည်စက်ဘီးအတွက်ယူရို ၁၀၀၀ ၀ န်းကျင်၊ ပေါင်ဒေါ်လာအထိဈေးသက်သာပြီးချောမွေ့သည်။
ပြီးတော့သူတို့ကပိုပေါ့လာတယ်၊ ချွင်းချက်ကတော့ပိုကောင်းတဲ့အီလက်ထရောနစ်ဂီယာတွေဘဲ။ သူတို့စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အခုတော့ဂီယာအရေအတွက်ဟာပြbigနာကြီးကြီးမားမားမဖြစ်သင့်ပါ။
နောက်ကွယ်ဂီယာနည်းပါးခြင်းကစွမ်းဆောင်ရည်အနည်းငယ်ပိုနည်းပြီးအလေးချိန်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဘီးနှင့်တာယာများသည်စီးရခြင်း၏အရည်အသွေးကိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အလင်းအစုံသည်သင်၏စက်ဘီးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုကို ၀ ယ်တဲ့အခါ၊ သူကပြောထားတာတွေကိုဂရုပြုပြီးသေချာတာကတာယာတွေပြတ်သားတဲ့တာယာတွေရဖို့စက်ဘီးပေါ်ကတခြားနေရာကိုကိုယ်ကျိုးစွန့်တာမျိုးလုပ်ပေးပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောကုန်းနှီးများ၊ ခြေချောင်းများနှင့်ကြိုးများဖြင့်သင်မနှစ်သက်ပါသလော။ သူတို့ကိုသင်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်သည်။ ဒါကသင်ဘတ်ဂျက်နည်းနည်းနဲ့ဘေးဖယ်ထားလိုက်တာပဲ၊ ဒါ့အပြင် clipless pedals တွေ ၀ ယ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံတမျိုးနဲ့လက်ကိုင်ဘားကို ၀ ယ်တာကစက်ဘီးကိုတကယ်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်တခုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးစက်ဘီးဖြစ်စေမယ့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုကနေဖယ်ထုတ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ အနည်းဆုံးတော့သင့်ရဲ့စက်ဘီးရဲ့လှပမှုပါပဲ။
ကောင်းပြီ၊ ငါထင်တယ်၊ စက်ဘီးရွေးတာဟာဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့မတူဘူးဆိုရင်တောင်ငါတို့စာရင်းမှာပိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ အကယ်၍ သင်စက်ဘီးတစ်စီး၏ပုံသဏ္reallyာန်ကိုတကယ်နှစ်သက်ပါက၎င်းကိုသင်မြင်သည့်အခါတိုင်းသင်၏နှလုံးကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေလျှင်၊ ငါ့အမြင်တွင်၎င်းသည်စက်ဘီးကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၎င်းကိုကြည့်ရှုတိုင်းယင်း၏အားနည်းချက်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်သည် စက်ဘီးစီးချင်တယ် စက်ဘီးကြီးပါ
ယခုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်များအပိုင်းတွင်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးစက်ဘီးသည်သင်ထင်သည်ကိုအဘယ်ကြောင့်နှင့်အမှန်တကယ်ဖြစ်သနည်းဟုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ ထိုအခါလည်း GCN စာရင်းသွင်း။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကမ္ဘာကိုနှိပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်ဟာအကောင်းဆုံးစက်ဘီးဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီနိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေနေပါက Endurance Bike နှင့် Arrow Bike vs Lightweight Bike တို့သည်အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိသည်။
Hybrid စက်ဘီးများအတွက်အလွန်လူကြိုက်များရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်ဆိုင်ကယ်ခရီးသည်များ, သူတို့ရဲ့ဘက်စုံမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မှန်ပါတယ်၊ ငါဟာ Cross-country တောင်တက်စက်ဘီးကအဆုံးစွန်သောလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်။ သူတို့တွေဟာဘာမှမပေါ်လာဘူး၊ သူတို့ဟာစူပါအလင်းပါ။ - အိုကေ၊ နင်၊ ကျွန်တော်သဘောမတူဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်လမ်းပြတစ် ဦး ကဘာလဲဆိုတော့ဆိုင်ကယ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်သူတို့ကကျောက်စရစ်ဆိုင်ကယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကတကယ့်အရာပဲ။ လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်များသည်ကျောက်စရစ်ခဲကိုလမ်းလျှောက်ရန်အတွက်အထူးစက်ဘီးများလိုသည်။ လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်များကိုတတ်နိုင်သလောက်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ Donny.- ခြေချောင်းကိုလှမ်းကြည့်ပါ။ ကောင်းပြီ၊ ငါစက်ဘီးစီးတာကပိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်၊ သူတို့ကစွယ်စုံပါ၊ သူတို့ကအနိုင်ရမှာသေချာတယ်။ - ကောင်းပြီ, ငါနှိမ့်ချကျောက်စရစ်ဆိုင်ကယ်တက်သည်
ဒါကိုငါတို့စမ်းသပ်သင့်ပြီထင်တယ်။ အီတလီမြောက်ပိုင်း၊ တောင်ပိုင်း Tyrol ရှိ Dolomites မှာလည်းလုပ်နိုင်တဲ့နေရာ။ ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာရှာတွေ့နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်၊ အဲဒါကကျောက်စရစ်ခဲနဲ့ဆိုင်တဲ့စက်ဘီးနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်။ (ရော့ခ်ဂစ်တာတေးဂီတ) - ငါတို့မစတင်မီဘာလဲ။ ကျောက်စရစ်ဆိုင်ကယ်လား? ရဲ့ဖြောင့်, ရကြပါစို့? တစ်ချက်ကြည့်လျှင်၎င်းသည်လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်တစ်စီးနှင့်တူသည်၊ ၎င်းတွင်၎င်းတွင်တူညီသော DNA များစွာရှိသည်။
Drop bars တွေဟာကျောက်စရစ်စက်ဘီးပေါ်မှာမရှိမဖြစ်လိုတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ သို့သော်တာယာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုမိုပါးလွှာသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၃၅ မိုင်နှင့် ၄၀ မိုင်အကြားသို့မဟုတ် ၁.၅ လက်မခန့်ရှိသည်။
ဘီးများ၏အရွယ်အစားသည် 29er နှင့်တူညီသည်။ ပြိုင်ကားမောင်းခြင်းနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ သို့သော် ၂၇.၅ လက်မဘီးများနှင့်တောင်တက်စက်ဘီးစီးခြင်းတို့ဖြင့်ကျောက်စရစ်စက်ဘီးများရှိသည်။ ဒါကြောင့် XC ရဲ့လမ်းကြောင်းအတွက်လိုင်းများနှင့်အနည်းငယ်ပိုမှုန်ဝါး။
တကယ်တော့စက်ဘီးကိုယ်နှိုက်၊ ထိပ်ပြွန်က XC စက်ဘီးစီးတာထက်အများကြီးပိုတိုတယ်၊ ဒါဆို drop bars တွေနဲ့စီးနင်းတဲ့အခါမှာမင်းကအချိန်အများစုကိုဒီမှာကွင်းခတ်တွေဆီကိုအမြဲတမ်းသုံးနေလို့ပဲ။ သငျသညျ၌တက်အဆုံးသတ်အနေအထားဖြစ်ကောင်းတော်တော်လေးဆင်တူသည်, သင်၏အရာသည်ကျောက်စရစ်စက်ဘီးကိုလုံးဝခိုင်မာသောဖြစ်လေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲမဟုတ်, ယေဘုယျအားဖြင့်။
တကယ်တော့သင်စီးနင်းလိုက်ပါတုန်းက ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာတောင်တက်တာနဲ့တူတယ်။ (ဘီးများလှုပ်နေတယ်) ဟုတ်တယ်၊ နီးလ်၊ နံပါတ်တစ်၊ ငါးကီလိုမီတာကျောက်စရစ်ခဲအချိန်စမ်းသပ်မှုစိန်ခေါ်ချက် - ဒါကဘာကိုသက်သေပြမလဲ။ - ကျောက်စရစ်စက်ဘီး၏သာလွန်မှု - နှင့်အချိန်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကားအဘယ်နည်း။ - ၎င်းသည်ကုန်းမြင့်သို့တက်သော်လည်းကျောက်စရစ်ပေါ်တွင်ပြားပြားနေတယ် The Flaton Gravel သည်ပျော်စရာကောင်းမည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်စီးနင်းရန်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။ XC စက်ဘီးနှင့်သွားသောကျောက်စရစ်စက်ဘီးပေါ်တွင်သင်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုသင်ပိုမိုရှေ့ဆက်သွားနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ သင်သည်စူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ နေရာအသစ်များသို့မတူညီသောနေရာများသို့သွားနိုင်ခြင်း၊ အလုပ်များသောလမ်းများသို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်သင်ကိုယ်တိုင်အလွန်အမင်းစိတ်မပါဘဲမည်သည့်အရာကိုမဆိုလုပ်နိုင်သည်။ (မကျေမနပ်သောတီးမှုတ်သည့်တေးဂီတ) - ၎င်းသည်ပျော်စရာမဟုတ်။ Si ကဒီမှာငါ့ကိုဝင်တိုက်လို့ပါ။ (မကျေမနပ်တီးမှုတ်သောတေးဂီတ) 'ကေ၊ စီ၊ မင်းငါ 5K ပြားချပ်ချပ်အချိန်တိုအတွင်းစမ်းသပ်မှုမှာငါကိုယ်တိုင်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်
အခုဒီစမ်းသပ်မှုဟာဘက်စုံသုံးမှုပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုရောက်နေပြီ၊ ကျောက်တုံးကြီးတွေအမြစ်တွယ်နေပြီ၊ တောင်ကြီးတောင်ငယ်တစ်ခုရဲ့ဒီဇိုင်းကိုလည်းတီထွင်ခဲ့တယ်။ ) နေးလ်၊ တစ်မိနစ်စောင့်ပါ။ အပေါ်ကိုင်, ကိုင်, နီးလ်, ကိုင်! (cheeky electronic music) - ဟေ့ဒီတော့ဒါကလမ်းကြောင်းတစ်ခုကောင်းကောင်းရမယ်၊ သိသာထင်ရှားတဲ့ငါ Cross Country စက်ဘီးလိုချင်ပေမယ့်ငါနေဆဲတော်တော်လေးကျယ်ပြန့်တာယာများ, ရပ်ဆိုင်းမှုလမ်းဆုံလမ်းခွ, ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲအများကြီး, နှစ်သိမ့်အများကြီးရှိပါတယ်။
ငါ့မှာလက်ကိုင် ၇၂၀ မီလီမီတာရှိတယ်၊ ငါဒီကိုလမ်းပေါ်မှာစီးချင်မှာ၊ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ကျောက်စရစ်စက်ဘီးစီးမယ်။ ဘယ်လိုလဲ - အင်း၊
ဒါပေမယ့်ငါမလိမ်ချင်ဘူး၊ အဲဒီမှာတောင်ပေါ်မှာစက်ဘီးစီးတာကိုငါကြိုက်တယ်။ ဒါဟာသေချာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Cross Country Mountain စက်ဘီးတွေဟာနည်းပညာပိုင်းအရပိုကောင်းတာပဲဆိုတာခင်ဗျားသေချာပေါက်သက်သေပြနိုင်ခဲ့တယ်၊ သငျသညျထိုသူတို့အနညျးငယျသောသှနျသငျခှငျ့ပွုလုပျနိုငျ, Neil The XC စက်ဘီးပေါ်ကကျောက်စရစ်ဆိုင်ကယ်, သင်တို့ကိုငါ 10 ကီလိုမီတာကျောက်စရစ်တောင်တက်ရန်သင့်အားစိန်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်။ (Wheel hums) (ပျော့ပျောင်းသောအီလက်ထရောနစ်ဂီတ) - Si၊ ဒါတွေအားလုံးသက်သေပြနိုင်မယ်ဆိုတာသေချာလား။ သူငယ်ချင်း။
လူတိုင်းသည် 10K ကျောက်စရစ်တောင်တက်ခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ သွားကြကုန်အံ့။ အို, crikey, အဘယ်သူသည်, လွယ်ကူသော, အိမ်ထောင်ဖက်, whoa whoa! (မတိကျသောအီလက်ထရောနစ်တေးဂီတ) ကျွန်ုပ်သည်ဤသည်သည်အနည်းငယ်မြန်ဆန်သောနိုင်ငံဖြတ်ကျော် hardtails များအမှန်တကယ်တက်လာနိုင်သည့်အတွက်ဖြစ်နိူင်မည်ဟုအနည်းငယ်စိုးရိမ်ခဲ့သည်။
ဤစက်ဘီးနှစ်စီးအကြားတစ်ခုတည်းသောကွာခြားချက်မှာနေရာဖြစ်သည်။ သငျသညျကျယ်ပြန့်လက်ကိုင်နှင့်အတူပိုမိုအဆင်ပြေ, သူတို့ကအနည်းငယ်ပိုပြီးဖြောင့်မတ်ဖြစ်ပါသလား, ဒါမှမဟုတ်သင်ကအနည်းငယ်ကျဉ်းမြောင်းခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား - အင်း၊ ဒီနေ့စက်ဘီးကနင့်ကိုအရမ်းကောင်းတယ်၊ အလင်းပေါ့တယ်၊ သဘာဝ၊ တာယာတွေကအရမ်းမြန်တယ်၊ ဒါဆို Cross Country ဆိုင်ကယ်အရမ်းတက်နေတယ်။ ငါနောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုလည်းလာနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်, တာယာအနည်းငယ်ပိုပြီးလာနိုင်ကြောင်း, နည်းပညာတိုးတက်မှု g-tajers, 30 psi ။
ငါရပ်ဆိုင်းမှုရရှိပါသည်, ငါတောင်ကုန်းကိုတက်ဖို့ကြိုးစားနေစဉ်ငါလိုအပ်ပါတယ်သင့်တယ်ငါတကယ်ဂီယာအနိမ့်ရရှိပါသည်။ - အဆင်ပြေမယ်၊ သူတို့မှာဖိအားအတော်လေးနည်းနည်းပိုပါးလွှာတဲ့တာယာတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်မှာဒီလေယာဉ်ပျံဘီးတွေရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါကြည့်ရတာအေးအေးဆေးဆေးပဲ။ အိုကေ၊ အဝေးဆုံးသွားသူကအနိုင်ရသူပါ။ - အမှတ်
ယုန်နှင့်လိပ် - ငါပိုမြန်ပြေးနိုင်! - စက်များပေါ်တွင်ကြိတ်ခြင်း။ (နူးညံ့သောအီလက်ထရောနစ်ဂီတ) ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုတောင်ဘုရင်ဟုခေါ်ဆိုသည် - ၎င်းသည်ဆက်လက်တည်ရှိသလား။ - အိုးမဆိုး။ (Mellow အီလက်ထရောနစ်ဂီတ) - (ရယ်သံများ) ကောင်းပြီ၊ ငရဲ။ (ရယ်သံများ) ကောင်းပြီ, Neil ။
အိုကေ၊ နီးလ်။ ငါငြင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ သင်ဟာနိုင်ငံဖြတ်ကျော်စက်ဘီးတွေကိုနည်းပညာပိုင်းအရပိုပြီးစွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းသက်သေပြပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့်အချိန်ကာလပဲပြောပါရစေ။ ကျောက်စရစ်စက်ဘီးတွေရဲ့လှပမှုကသူတို့ဟာလွယ်လွယ်ကူကူပစ္စည်းတွေမထုတ်လုပ်နိုင်တာကြောင့်ခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမလိုအပ်ပါဘူး။ သူတို့ကပိုမိုလွယ်ကူသောလမ်းကြောင်းများကိုကျွန်ုပ်အတွက်မကောင်းသောဆင်ခြေများဖြစ်စေသည် - ကျွန်ုပ်သည်နီလ်အတွက်အကောင်းဆုံး၊ ကျွန်ုပ်၌အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင့်စက်ဘီးမှာဂီယာဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ - ငါ့မှာ ၁၁ ယောက်ရှိတယ်။ ငါလိုချင်ရင် ၂၂ ရမယ်။ ကောင်းပြီ၊ ငါ့မှာ ၂၂ ရှိတယ်။ မင်းရဲ့ဘားတွေကဘယ်လောက်ကျယ်သလဲ။ - မီလီမီတာ ၄၄၀ - ၇၂၀။ အိုကေ၊ သင်၏ ၇ မီလီမီတာပေါ်တွင်လက်အနေအထားမည်မျှရှိသနည်း။ - တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တွင်လက်တစ်စုံရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ငါးခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာ built-in ဘားအဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ အလေးချိန်မှာ ၁၂၀၀ ဂရမ်ခန့်ရှိပြီး၊ - သတ္တုတွင်းသည် ၈၇၀ ဂရမ်ရှိသည်။ - အင်း၊ ၁၈၀၀ ဂရမ်၊ မိုင်း ၄၄၀ ဂရမ်၊ သင့်ရှေ့တန်းလမ်းဆုံဘယ်လောက်သွားမလဲ။ ချစ်ခင်ရပါသော။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ပတ် ၀ န်းကျင်၌လျှောက်လည်နေပြီ
ငါတို့လိုအပ်တာကိုမင်းသိလား ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူကိုလိုအပ်တဲ့နောက်ဆုံးစိန်ခေါ်မှုလိုပဲ။ ၁၁၃ ကီလိုမီတာရှိသောကျောက်စရစ်များ၊ လမ်းဘေး၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ - Dolomites မှာမင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ - Dolo မှာမင်းဘာသိလဲ။ ငါကနေ့လည်စာအားလုံးပေါ်မှာထိုင်တော်မူ၏။
Neil သည် Dolomiti Superbike113 ကီလိုမီတာတောင်ကြီးစက်ဘီးမာရသွန်ပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ - သင်ရောက်နေပြီ။ ဆောင်းပါးကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကြရအောင်။ သင်ဒီမှာနှိပ်ရုံဖြင့်ချက်ချင်းခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။
မည်သူသည်အနိုင်ရရှိသူ၊ ကျောက်စရစ်ခဲသို့မဟုတ်တောင်တက်စက်ဘီးဖြစ်လိမ့်မည်နည်း။ ? - ဘယ်သူသိလဲ၊ စာရင်းသွင်းဖို့ GMBN လိုဂိုကိုနှိပ်ပါ။ ဒီစက်ဘီးအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက Superbike Dolomiti ကိုစီးပါ။ ကျွန်ုပ်မှာဤစက်ဘီးရှိသည်။ ဟုတ်တယ်၊ ကံကောင်းပါစေ၊ နေး၊ သင်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ထိပ်ဆုံးဆိုင်ကယ်အမှတ်တံဆိပ် ၁၀ ခုကဘာတွေလဲ။
ထိပ်တန်း 10 ဆိုင်ကယ်အမှတ်တံဆိပ်ကမ္ဘာမှာ စာရင်းစက်ဘီးစီးနှင့်လူကြိုက်များသောစက်ဘီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်
၇) Marin သံသရာ။
၆) Cannondale ။
၃) Santa Cruz ။
၂၀၁၆ ပြိုင်ပွဲရာသီသည်မှတ်ဥာဏ်ကိုသာပေးနိုင်သည်၊ သို့သော်ယခုကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာ့ခရီးတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင် 2016 ကိုစဉ်းစားရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ Matt-Hayman ၏ Paris-Roubaix ၌မယုံနိုင်လောက်အောင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ Steven Kruijswijk သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်နီးကပ်လာပြီဖြစ်သည်။ Giro d'Italia ကိုရရှိရန်နီးကပ်စွာနာကျင်နေပြီဖြစ်သည်။ Peter Sagan သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးကမ္ဘာ့ချန်ပီယံအဖြစ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။
မြင်းစီးသူရဲတွေကိုယ်တိုင်ကအရမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုငါတို့သိနေပေမဲ့အခုအဲဒီစက်ဘီးကိုသူတို့ဘယ်ရောက်သွားပြီဆိုတာငါတို့တကယ်သိချင်နေပြီ။ Matt Hayman လိုပဲ Paris-Roubaix သာမကဘဲ aero ဆိုင်ကယ်လည်းပါပါတယ်။ ဟုတ်တယ်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအချက်အလက်များစွာကိုအကုန်လုံးစိစစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာအအောင်မြင်ဆုံးလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်ဆယ်စီးရဲ့နောက်ဆုံးစာရင်းကိုပေးဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ဘယ်လိုတိတိကျကျလုပ်ခဲ့ကြတာလဲ၊ ကောင်းပြီငါတို့သင်္ချာကိုသုံးခဲ့တယ် ကျွန်တော်တို့ဟာသင်္ချာမှာအဂတိလိုက်စားမှုကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် Daffyd Thomas လို့ခေါ်တဲ့သင်္ချာပါရမီရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီး World Tour of Bikes ကိုအတူတကွတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။
World Tour ပြိုင်ပွဲများနှင့်၎င်းတို့၏အဆင့်အသီးသီးကိုစားပွဲတစ်ခုတွင်ထည့်သွင်းပြီးအမှတ်များကိုရရှိခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး, ငါတို့ကဲ့သို့သင်တို့အများစုသည် UCI World Tour မှာရမှတ်ဆုချီးမြှင့်နှင့်အတူသေချာပေါက်သဘောမတူဘူးလို့သံသယရှိကြသည်။ ငါတို့ရေးပြီးပြီဆိုတာမင်းသိမှာပဲ။
မှန်ပါတယ်။ Paris-Roubaix နှင့် Tour of Flanders တို့ကဲ့သို့သောပြိုင်ပွဲများသည်တစ်ရက်တည်းတွင်နာမည်ကြီးသည့်ပြိုင်ပွဲများဖြစ်သည့်ယခု UCI အမှတ်များထက် GCN အချက်များပိုမိုရရှိသည်။ Tour de France စုစုပေါင်း ၁၀၀ GCN မှတ်၊ Paris-Roubaix သည် ၈၀ GCN မှတ်ဖြစ်သည်။
သို့သော် Tour de France တွင်အဆင့်အနိုင်ရရှိခြင်းသည်အချိုးအစားပိုမိုများပြားစေသည်။ ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်သင်ဟာ de de France ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တစ်ခုတည်းရဖို့အဆင့်ငါးဆင့်သာရရမယ်။ - အထင်ကြီးစရာကောင်းတယ်၊ ငါတို့အဲဒီမှာတောင်မပြီးသေးဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှုပ်ထွေးသည့်တွက်ချက်မှုများရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာကမ္ဘာ့ Tour အသင်းတစ်ခုတည်းကိုသာထောက်ပံ့သောစက်ဘီးထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်ကအသင်းသုံးဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့သောထုတ်လုပ်သူထက်အချိုးအစားပိုများလိမ့်မည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းက World Tour အဖွဲ့သုံးခုကိုစပွန်ဆာလုပ်တဲ့အခါ၊ World Tour အောင်ပွဲကပိုပြီးတော့လွယ်ကူတယ်။ ညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုပဲရှိတယ်၊ အများဆုံးကွာခြားချက်တစ်ခုကပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ ၅ ခုပဲ။ ဒန်ကအရေးကြီးတယ်။
အချိန်တန်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ၂၀၁၆ ရဲ့ဒသမအအောင်မြင်ဆုံးပြိုင်ကားဆိုင်ကယ်အတွက်။
ဒါဟာ- GCN အချက်များနှင့်အတူ Lapierre Xelius SL ဖြစ်ပါတယ်။
Criterium du Dauphine နှင့် VueltaaEspana တို့တွင်အဆင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သော်လည်း၊ အနိုင်ရရှိမှုမှာမတ်လမီလန် - ဆန်ရီမိုတွင် Arnaud Demare ၏အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အားလုံးဆိုလိုတာကတော့သင်ဟာ TopTen ထဲကိုလွယ်လွယ်ကူကူ ၀ င်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်သင်ရမှတ်များလုံလောက်စွာရရှိထားပြီလို့ဆိုလိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက Demare သည် Lapierre အတွက်ပေါ့ပါးသောဤမော်ဒယ်ကိုသွားခြင်းဖြစ်သည်၊ Aircode ကိုဆန့်ကျင်။ စက္ကူပေါ်တွင် Sprinter အတွက်ပိုမိုမြန်သောပုံစံဖြစ်သည်။ - ကိုးခုမြောက်တွင် Ridley Helium SL ၁၁၄ GCN မှတ်ရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Helium SL သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အအောင်မြင်ဆုံးစက်ဘီးများစာရင်းတွင်နံပါတ် ၁၀ နေရာရရှိခဲ့သဖြင့်ယခုနှစ်တွင်တစ်နေရာတက်ခဲ့သည်။ Mont Ventoux ရှိ Thomas De Gendt အပါအ ၀ င် Grand Tours တွင်၎င်းသည်ပိုလန်၏ Tour Tour ၏အလုံးစုံကိုအနိုင်ရခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဒီဟာက Helia SL ကို World Tour မှာတွေ့ရတဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်ဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမယ့် Ridley ကပိုမိုပေါ့ပါးတဲ့ Helium အသစ်ကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ စိတ်ရှုပ်စရာမလိုပါဘူး။ နေရာရှစ်နေရာတွင် ၁၃၆ GCN အချက်များပါ ၀ င်သော Scott Addict သည် ၂၀၁၃ နွေရာသီတွင်ပြန်ဖွင့်သည်နှင့် ထပ်မံ၍ featherweight စက်ဘီးတစ်စီးဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ဒီနှစ်မှာအနိုင်ရခဲ့သူများစွာရှိပြီးပန်းရောင်ဂျာစီကို Giro d'Italia ရဲ့အဆုံးမှာပန်းရောင်ဂျာစီကိုသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ Esteban Chaves တစ်ယောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ဒီဟာကိုထိပ်ဆုံးဆယ်ယောက်ထဲကိုရောက်သွားတာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ - ဟုတ်ပါသည် - နံပါတ် ၇ သည် 150GCN အချက်များရှိသော Cervelo S5 ဖြစ်သည်။ ယခုဤစက်ဘီးသည်ယခုနှစ်တွင်ရလဒ်ကောင်းများရရှိခဲ့သည်။ Mark Cavendish သည် Tour de France တွင်အဆင့် (၄) ဆင့်စီးခဲ့သည်။ Stephen Cummings ကတစ် ဦး အနိုင်ရသည်။ ဤစက်ဘီးအတွက်ပြောရမည့်အချက်မှာ Cervelos သည် Paris-Roubaix မှလွဲ၍ ပြိုင်ပွဲတိုင်း၌ super-light R5 နှင့်အတူမြင်းစီးသူရဲများအားရပ်တန့်ခဲ့သောကြောင့်၎င်းတို့တွင်တစ်ခုသာရှိသည် ရွေးချယ်မှု, လေခွင်း S5 ကို။
ဆိုလိုသည်မှာယခုရာသီအနိုင်ရရှိမှုအားလုံးသည်ဤစက်ဘီးပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ ဒန်ကိုပြောပြမယ်၊ အနည်းဆုံးတော့ဒီစက်ဘီးဟာ ​​UCI World Tour ရှိအဖွဲ့ထက် GCN World Tour မှာပိုကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုငါပြောခဲ့တယ်။ ငါတို့ထင်တာကငါတို့ဟာမျှတတယ်လို့ထင်တယ်။ - အတိအကျ။ - ဆဌမနေရာ၌ ၁၇၁ GCN အချက်များဖြင့်အထူးပြု Venge Vias ဖြစ်သည်။
ဒီတော့ Cervelo S5 ပြီးနောက်ထိပ်ဆုံးဆယ်ယောက်ထဲမှာဒုတိယမြောက် Aero ဆိုင်ကယ်။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကအလွန်အဆင့်မြင့်တဲ့ဆိုင်ကယ်ပဲ။ ဆိုလိုတာကတော့ World Tour ရှိအခြားစက်ဘီးအများစုကိုမသုံးပါ။ Peter Sagan နှင့် Marcel Kittel တို့၏မောင်းနှင်မှုကြောင့် Grand Tour ၏အဆင့်များစွာအပါအ ၀ င်အလွန်အောင်မြင်သောတစ်နှစ်ရှိသေးသည်။
ကောင်းပြီထင်ပါတယ်။ အဲဒါကိုဖြန့်ချိလိုက်တာနဲ့အကောင်းအဆိုးတွေကတော်တော်လေးတဖြည်းဖြည်းလက်ခံလာတာဆိုတော့တရားမျှတတယ်လို့ထင်တယ်၊ အခုတော့သူတို့ကိုတားဆီးဖို့ခက်တယ်။ နံပါတ် ၅ က BMC Team MachineMC SLR01 ဆိုတာရမှတ် ၁၉၈ ရှိတယ်။ ယခုတွင် World Tour တွင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းသာရှိပြီး BMC တွင်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဒီနှစ်သူတို့ရဲ့အဓိကမောင်းနှင်သူတစ် ဦး ဖြစ်တဲ့ Richie Porte ဟာဒီနှစ် World Tour ပြိုင်ပွဲတစ်ခုသာနိုင်ခဲ့တယ်။
ကျန်အစိတ်အပိုင်းများမှာအဓိကအားဖြင့် Greg Van Avermaet ၏ Tirreno-Adriatico၊ Montreal GP ရှိစုစုပေါင်းအသင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် Tour de France တွင်စင်မြင့်အနိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ စင်မြင့်စင်မြင့်မှ၎င်းတို့အတွက်ခိုင်မာသောခိုင်မာသည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ စတုတ္ထနေရာမှာ ၃၆၆ မှတ်ရှိပြီး Canyon Ultimate CF SLX ဟာ BMC Team Machine ကိုကျော်ပြီး ၁၆၈ မှတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီစက်ဘီးကဒီနှစ်မှာ Vuelta ပုံစံနဲ့ Grand Tour အဆင့်ဆင့်မှာ Grand Tour ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ Mobistar နဲ့ Katusha နှစ်ခုစလုံးကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ဒီနှစ်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ရလဒ်အနည်းငယ်ကိုနက်နက်နဲနဲလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်မှာတော့တခြားစက်ဘီးတွေထက်တောင်တန်းတွေပိုပြီးအနိုင်ရသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
မှန်ပါသည်၊ အကယ်၍ သင်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၏အခက်ခဲဆုံးအဆင့်များကိုသာပြုလုပ်ပါက CanyonUltimate CF SLX သည်တစ်နှစ်တာ၏စက်ဘီးစီးနေကြောင်းတွေ့ရလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အိမ်ထောင်ဖက် - မင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမရှင်းပြပါနဲ့၊ - ပြီးခဲ့သည့်နှစ်စာရင်း၏တတိယနှင့်စတုတ္ထနေရာများဖြစ်သော Paris-Roubaix သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ဘီးစီးခြင်းတွင်အကြီးမားဆုံးဆုတစ်ခုရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်၎င်းသည် Scott Folie ဖြစ်သည်။ အခုတော့ Mat Hayman ကဒီကိုကျောက်တုံးကျောက်ခဲလမ်းပေါ်မှာဖိနှိပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစွယ်စုံသုံးစက်ဘီးဈေးအကြီးဆုံးအတွက်ယှဉ်ပြိုင်နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း Orica နဲ့ IAM Cycling မှ Caleb Ewan နဲ့ Oliver Naesen တို့ရဲ့ဒန်အထိဒန်အထိကစားနိုင်ခဲ့တာကတော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုတစ်နေ့တာပြိုင်ပွဲမှာအအောင်မြင်ဆုံးစက်ဘီးအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာပါပဲ။ အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ဖော်ပြပါ။ Up Up Pinarello Dogma F8 သည်ဒုတိယနေရာ၊ ဒုတိယနှင့်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။
ဒါဘယ်လောက်အံ့အားသင့်စရာပါလဲ။ သိပ်မများပါဘူး။ အကယ်၍ ရလဒ်များကိုသင်ကြည့်ပါက၎င်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံးအဆင့်စက်ဘီးစီးခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရလိမ့်မည်။ ၁ မှတ်သာရရှိပါကကောင်းမွန်သောအချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Chris Froome စီးနင်းစီးနင်းခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်မမေ့ပါနှင့် Geraint မထင်ပါနှင့် သောမတ်စ်သည်ယခုနှစ်တွင်ပင်ရီနီယန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ပြီးတော့တစ်ရက်ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းအရမ်းကောင်းတယ်။
Wout Poels နှင့် Michal Kwiatkowski တို့နှစ် ဦး စလုံးသည်အလွန်ကြီးမားသောအောင်ပွဲများကိုရရှိခဲ့သည်။ ဒီမတိုင်ခင်ကသတ္တုကိုယ်ထည်လိုပဲဒီဟာကစွယ်စုံသုံးတဲ့ aero ဆိုင်ကယ်ပဲ။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်, 2016 ၏အအောင်မြင်ဆုံးပြိုင်ကားစက်ဘီးအထူးပြုတက်တူးထိုး။
ဒါကမှန်တယ်၊ ဒုတိယနှစ်ပြေးပွဲမှာ Big S မှပေါ့ပါးသောစက်ဘီးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းကို 661 GCN အချက်များဖြင့်လွှမ်းမိုးထားသည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၁၀ ယောက်မြောက်အရောင်းရဆုံးဆိုင်ကယ်ထက် ၆ ဆပိုများပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ Peter Sagan, Alberto Contador နဲ့ Vincenzo Nibali တို့လိုလူတွေဟာဒီစက်ဘီးကိုသုံးကြတာကိုအတူတကွယူကြပြီးသူတို့ရဲ့ Palmares ဟာရိုးသားစွာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည်ဟုသင်စဉ်းစားမိသောအခါအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။
၎င်းသည်လေခွင်းမဟုတ်သလိုအပေါ့ပါးဆုံးစက်ဘီးလည်းမဟုတ်သော်လည်း World Tour-grade အစိတ်အပိုင်းများနှင့်နီးလျှင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကမ္ဘာ့ခရီးစဉ်၏အလေးချိန်ကန့်သတ်ချက်ရှိသော်လည်းဒန်၊ လေယာဉ်အင်ဂျင်နှင့်ပေါ့ပါးအလေးချိန်တို့သည်အရာများမဟုတ်ပါ။ စက်ဘီးပြိုင်ပွဲအနိုင်ရ - အိုး, ငါ့စကားလုံး။ ဟုတ်တယ်၊ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ကဒီအကြောင်းကိုကြာကြာမစဉ်းစားတော့ဘူး၊
အချို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ငါ BMC နှင့် Pinarello သည်၎င်းတို့၏စီးနင်းသူများအတွက်ရာသီတစ်လျှောက်လုံးမည်သည့်နေရာ၌မဆိုအသုံးပြုနိုင်သောမော်ဒယ်တစ်မျိုးသာရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအနိုင်ရသူအားလုံးသည်ထိုမော်ဒယ်တစ်ခုအပေါ်တွင်သာအာရုံစူးစိုက်လိမ့်မည်။ Specialised နှင့် Giant ကဲ့သို့သောအခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်မြင်းစီးသူရဲများအားမြေအနေအထားအမျိုးမျိုးအတွက်ရွေးချယ်ရန်မော်ဒယ်သုံးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းသော်လည်းသူတို့၏အောင်မြင်မှုများမှာမူ ပို၍ ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်စက်ဘီးစီးသူသည်မည်သူအောင်မြင်ခဲ့သနည်းဟူသောမေးခွန်းပေါ်ပေါက်လာသည်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်တို့လည်းရလဒ်လည်းရှိတယ်။
ပဉ္စမနေရာမှာ BMC ဖြစ်တယ်၊ စတုတ္ထနေရာက Canyon၊ တတိယနေရာက Pinarello၊ ဒုတိယကတော့ Scott ပါ။ ဒုတိယအံ့ no စရာမရှိပါဘူး။ ပထမနေရာမှာ Venge Vias ကိုနံပါတ်ခြောက်နေရာမှာရှိပြီးနံပါတ်တစ်နံပါတ်မှာကတ္တရာရှိတယ်။ သင်တန်းအထူးပြုဖြစ်ပါတယ်။ - ကောင်းပြီသွားကြကုန်အံ့။ သင့်ကိုပြသရန်သင့်တွင်ပြရန်အချက်အလက်များနှင့်ဒေတာများစွာရှိသည်။ အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များတွင်သင်ကဤအရာကိုမေးပါကကျွန်ုပ်တို့သည်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသောဆောင်းပါးတစ်ခု၏အကြောင်းအရာများကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာနားလည်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ခဲ့သည်။
ပြီးတော့ငါတို့နေထိုင်သူသင်္ချာပါရမီကနေအသွင်အပြင်ကိုတောင်ရကောင်းရလိမ့်မယ် ကောင်းပြီ၊ ငါက 'ပါရမီ' ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုထိထိရောက်ရောက်မသုံးပါဘူး။
သူကစက်ဘီးစီးသူဟောင်းတစ် ဦး နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်စဉ်းစားသည်မှာ၎င်းသည်စဉ်းစားဟန်ရှိပုံရသည်။ သို့သော်သင်သိသည်မှာ - ငါကလုံးဝရိုးသားပါကသူ့ကိုရှင်းပြရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်ဟုထင်ပါသည်။ အချို့ - မဟုတ်ဘူး။ မင်းတို့ရဲ့အကြံဥာဏ်တွေကိုလည်းငါတို့ကြားချင်ပါတယ်။ ငါတို့ရဲ့ထိပ်ဆုံးဆယ်ယောက်နဲ့မင်းသဘောတူလား? ၎င်းသည်အအောင်မြင်ဆုံးသောတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့လျှင်ပင် 2016 ၏သင်အကြိုက်ဆုံးစက်ဘီးကားအဘယ်နည်း။
သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များတွင်ချန်ထားပါ - ဟုတ်ကဲ့။ ထို့အပြင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ရာသီအတွက်သင်အကောင်းဆုံးနေရာတွင်သာရှိနေလျှင် GCN ကိုသာစာရင်းသွင်းရန်သေချာစေပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မကြာမီဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းအားလုံးဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။ သင်ဤအရာကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်နောက်ထပ်ဆောင်းပါးအနည်းငယ်ရှိသည်။
ပထမ ဦး စွာ Chris Froome ၏လိုလားသူစက်ဘီး Pinarello - ဟုတ်ကဲ့။ ဒါမှမဟုတ်အလှမယ်နဲ့အောင်မြင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ Vincenzo Nibali ရဲ့အထူးပြုဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် - ဟုတ်တယ်။ သငျသညျဒီမှာကဒီမှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည် - ဟုတ်ကဲ့။
ကျနော်တို့စမ်းသပ်ပြီးစက်ဘီးရှိသည်ကုန်ကျစရိတ်အကြောင်းကို $ 300 ကနေ $ 2,000 မှ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေပိုမိုကာဗွန်ဖိုင်ဘာ၊ လူမီနီယမ် (သို့မဟုတ်ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးပေါင်းစပ်) သို့မဟုတ်မြင့်မားသောသံမဏိနှင့်အခြားအရည်အသွေးမြင့်သောအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပေါ့ပါးသည့်ဘောင်ကို ၀ ယ်လိုက်သည်။ ဒါပေမယ့်သင်ဆဲနိုင်သည်စက်ဘီးကောင်းတယ်ဒေါ်လာရာဂဏန်းအနည်းငယ်လောက်ပဲရှိတယ်။14ပြီ ၁၄ 2016
အဆင့်မြင့်တောင်တက်စက်ဘီးတစ်စီးဆိုတာဘာလဲ။ နေ့တိုင်းဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်ရတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စက်ဘီးအသစ်တစ်လုံး (သို့) အသုံးပြုတဲ့ဆိုင်ကယ်ရှာဖို့သင်လိုအပ်တဲ့ကိရိယာတွေကိုငါပေးလိုက်တာပဲ။ ဒါပေမယ့်ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ entry level bike ဆိုတာဘာလဲ။
အကယ်၍ သင်သည်အစပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးငွေအကန့်အသတ်မရှိရှိပါကဤဆွေးနွေးမှုပြီးဆုံးသွားသည်။ ရုံအဲဒီမှာထွက်သွား။ ကောင်းတဲ့စက်ဘီးပေါ်မှာပိုက်ဆံတစည်းဖြုန်းသင်ပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကတော့အရင်ကဆိုရင်လူအများစုကသင့်တင့်လျောက်ပတ်သောတောင်တက်စက်ဘီးစီးနေတုန်းမှာသူတို့လုပ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးငွေရေးကြေးရေးကတိကဝတ်ကိုရှာနေကြတယ်
ဒီစက်ဘီးကသင့်ကိုအခက်အခဲများစွာနဲ့ထပ်ခါထပ်ခါရောက်ဖို့လုံလောက်တယ်။ ပိုကောင်းသေးသည်မှာဒေါ်လာ ၃၂၉ ဖြင့်ရနိုင်သည်။ ဟုတ်ကဲ့။ Diamondback Overdrive နှင့် Diamondback ကိုစီးသည်။ သို့သော်သင့်ကိုယနေ့မေ့သွားစေချင်သည်။ အကြောင်းမှာ Diamondback သည်သင်နေထိုင်သောနေရာသို့မဟုတ်အသုံးပြုသောစက်ဘီးကိုကြည့်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီနေ့ဒီစက်ဘီးကိုအရောင်မဲ့ပြီးအမှတ်တံဆိပ်တွေမရှိဘူးလို့ယနေ့ငါထင်စေချင်တယ်။ သင်ဆန်းစစ်ကြည့်လျှင်၎င်းသည် 'ထိုက်တန်မှု' ဖြစ်ကြောင်းဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျမည်သို့ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်နည်း။ ကောင်းသောစက်ဘီးစီးခြင်း၏အရေးကြီးဆုံးအညွှန်းကိန်းဖြစ်သည့် derailleur ဆွဲကြိုးဖြင့်စတင်ကြပါစို့။ တောင်တက်စက်ဘီးကိုနောက်ကျောလှည့်စားစက်တပ်ဆင်ထားသည်ဆိုပါက၎င်းကိုသတ္တုအပိုင်းအစငယ်တစ်ခုကချိတ်ဆွဲထားသင့်သည်။
ပြိုလဲသွားပါကကွင်းကိုပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကြိုးကွင်းကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်တန်ဖိုး နည်း၍ ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အစားထိုးနိုင်သည်။ ဒီဟာကစက်ဘီးတစ်လုံးလုံးကိုအမှိုက်ပုံးထဲပစ်ချလိုက်တာထက်ပိုကောင်းတယ်၊ ဒါကသင့်ဘောင်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုချိုးဖောက်မယ်ဆိုရင်သင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။
ထိုကဲ့သို့သော patch ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူသတိထားပါသို့မဟုတ်ပိုဆိုး, တစ် ဦး derailleur ဘောင်ကိုတိုက်ရိုက်ပူးတွဲပါ။ ဤကဲ့သို့သောစက်ဘီးများသည်လုံးဝပျက်စီးခြင်းမှကျဆင်းသွားနိုင်ပြီးတောင်တက်ခြင်းများသည်ပြိုလဲခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်စက်ဘီးစီးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်မဖြစ်ဆုံးဖြတ်ရန် derailleur ဆွဲကြိုးသည်သင်ပထမ ဦး ဆုံးရှာဖွေသင့်သည်။
အရိုးရှင်းဆုံးစက်ဘီးများပင်ဤတွင်တိကျသော၊ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်အတူစတင်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အတူအဆုံးသတ်သင့်ပါတယ်။ နောက်အရေးကြီးသည့်ရှာဖွေရမည့်အပိုင်းမှာ SS ပင်စည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ဒီမှာဤညှပ်သော့ခလောက်များနှင့်လက်ကိုင်ဘားကိုကိုင်ထားသည့်သော့ခလောက် ၄ ခုတို့ဖြင့်သင်ခွဲခြားနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်ဤအရာကိုကြည့်ပါကများသောအားဖြင့်သတင်းဆိုးဖြစ်သည်။ သင်၏လမ်းဆုံလမ်းခွတွင်ပါ ၀ င်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်သို့မဟုတ်အစားထိုးရန်တစ်ခုခုရှိပါကသင်စိတ်မချရသောအစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်စပျစ်သီးပြွတ်တောင်ကြီးစက်ဘီးအစိတ်အပိုင်းများကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်။ သင့်ရဲ့အဟောင်းကိုအစားထိုးအသစ်စက်စက် '' 90s ရပ်ဆိုင်းမှုလမ်းဆုံလမ်းခွကိုရှာဖွေကံကောင်းပါစေ။
ကြိုးမဲ့ချည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးစျေးနှုန်းချိုသာရုံသာမကခိုင်မာတောင့်တင်းစေလိုသည့်အရာလည်းဖြစ်သည်။ ဘီးများသို့ရွေ့လျားပါက၎င်းတို့သည်လျင်မြန်စွာလွှတ်ပေးသည့်လီဗာများရှိသည်ကိုသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားများသည် entry-level စက်ဘီးများများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိပြီးသင့်အားကိရိယာများမပါဘဲဘီးကိုလက်ဖြင့်ဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်အစားထိုးရန်ခွင့်ပြုသည်၊ သို့သော် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းတို့သည်စက်ဘီး၏ရည်ရွယ်ထားသည့်အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။
တောင်တက်စက်ဘီးစီးစဉ်တွင်တာယာများသည်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ပါကဤအခွံမာသီးများကိုဖယ်ရှားရန်သင့်တွင် ၁၅ မီလီမီတာလိမ်ဖဲ့ခြင်းအမြဲရှိရန်ပြproblemနာရှိသည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ, ၀ င်ရိုးများ၌အခွံမာသီးများပါရှိသောတောင်ကြီးစက်ဘီးများသည်ဘီးကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ရှိသည်။ အတွေ့အကြုံရလာသောအခါဘီးများသည်သင်ကျော်တက်သွားလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့် entry-level Mountain ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကိုအမြန်လွှတ်လိုက်သည့်လီဗာများကိုရှာဖွေပါ။
နောက်တစ်ခုက crank နှင့် chainring assembly ကိုမော်ဂျူလာနှင့်အတူတကွသော့ခလောက်၊ အတူတကွစုစည်းပြီးကြီးမားသောအပိုင်းအစတစ်ခုအဖြစ်မထားပါ။ ဒီပြinနာကိုမင်းတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာသေချာပါတယ် ဒီနေရာမှာတစ်ခုခုကိုချိုးပြီးမင်းစက်ဘီးတစ်ခုလုံးရဲ့ကုန်ကျစားရိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါဆိုရင်မင်းကမင်းအတွက်အဆင်ပြေမယ်။
မဟုတ်ရင်သင်အမှန်တကယ်အမှားလုပ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါ။ နောက်ရှာဖွေရမည့်အရာမှာရှေ့နှင့်နောက်ဘရိတ်ဘရိတ်ဖြစ်သည်။ စျေးပေါသော disc ဘရိတ်များကိုတောင်ပိုကောင်းသူများအတွက်လဲလှယ်နိုင်သည်။ သတိပြုရန်မှာအရေးကြီးသည်မှာသင်၏စက်ဘီးသည်အစကတည်းကဤအရာအတွက်ပူးတွဲအချက်များရှိရမည်။
ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ disc ဘရိတ်များသည် rim ဘရိတ်များထက် ပို၍ စိတ်ချရသောကြောင့်၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာကတောင်ကြီးစက်ဘီးလုပ်ငန်းသည်၎င်းတို့အားလျင်မြန်စွာနှင့်ပြတ်ပြတ်သားသားပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့တောင်တစ်ခု။ အကယ်၍ စက်ဘီးသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပြီးအဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပါက disc brakes မပါဘဲတစ်စီးကိုအလွန်သံသယဖြစ်သင့်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ စက်ဘီးသည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိကြောင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူကသင်မည်သည့်အရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်၍ လမ်းညွှန်ပေးသည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကပျောက်သွားတဲ့အနုပညာဂူဂဲလ်ကိုအသုံးပြုရတာလွယ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်လုပ်သူကဒီအချက်အလက်ကိုမပေးရင်၊ သူတို့ကသူတို့စက်ဘီးတွေအကြောင်းသိပ်မစဉ်းစားကြဘူး။ ဒါကြောင့်သင်ကတောအုပ်ထဲကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းခေါ်ဆောင်သွားတာကိုမယုံဘူး၊ ဒါပေမယ့်သင်၌သင့်တော်မည့်စက်ဘီးတစ်စီးရှိသင့်သည်။
အခြားအညွှန်းများရှိပါက၎င်းစက်ဘီးသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါက၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သော ၀ င်ရိုးအဆင့်စက်ဘီးမှမျှော်လင့်ရမည့်အရာများနှင့်၎င်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်သင်လုပ်နိုင်သည့်အရာအချို့ကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မည်။ ပထမ ဦး စွာ၊ အဆင့်မြင့်တောင်တက်စက်ဘီးအားလုံးနီးပါးသည်ခရပ်နားထားခြင်းသို့မဟုတ်နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်မပါဘဲစက်ဘီးများဖြစ်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။
နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အတွက်လိုအပ်သောချိတ်ဆက်မှုသည်စျေးကြီးပြီးလေးလံသောကြောင့်ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီသောအချက်ကိုမစတင်မှီတိုင်အောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မသင့်ပါ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီဆွေးနွေးမှုကို hardtails နဲ့သာကန့်သတ်ထားမယ်။ Hardtails များသည်ပျော်စရာကောင်းပြီးမြန်ဆန်သောကြောင့်၎င်းတို့နှင့်စတင်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
သို့သော်ဒေါ်လာ ၅၀၀ အောက်ရှိ hardtails များသည် XC သို့မဟုတ် Cross-Country bikes များဖြစ်သည်။ XC စက်ဘီးနင်းခြင်းနှင့်ပါဝါဂီယာများအတွက် optimized နေကြသည်။ ၎င်းတို့သည်အကွာအဝေးရှည်လျားသောခရီးသွားလာရန်လျင်မြန်ပြီးအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။
သို့သော်သင်၏အကျိုးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စတင်လေ့လာသည့်အခါတွင်ဤအကျိုးကျေးဇူးများသည်သင့်ကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ဒါက XC စက်ဘီးပေါ်မှာခုန်လို့မရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာစက်ဘီးစီးတာနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်တာပါ။
Overdrive ဘေးရှိဤအနက်ရောင် hardtail လမ်းကြောင်းသည်စက်ဘီးစီးခြင်းနမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျယ်ပြန့်သောလမ်းဆုံလမ်းခွ၊ ရန်လိုသောထောင့်များ၊ ကျယ်ပြန့်သောလက်ကိုင်များ၊ ပိုမိုရှည်လျားသောခရီးသွားခြင်းနှင့်တိုတောင်းသောပင်စည်ကကျွန်ုပ်စီးသောအမျိုးအစားအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ XC စက်ဘီးကို Tra il ဆိုင်ကယ်အဖြစ်ပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်မပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းကြောင့်သင်၏စက်ဘီးကိုမဝယ်ခင်သင်၏တောင်တက်စက်ဘီးနှင့်သင်ဘာလုပ်ချင်သည်ကိုရိုးသားဖို့လိုသည်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေမနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေသင်၏ဘတ်ဂျက်သည်ဒေါ်လာ ၅၀၀ အောက်ဖြစ်ပါကနောက်ဆုံးသင်ဆိုင်ကယ်ကိုခုန်ကျော်။ ပစ်လိုက်သည့်အချိန်တွင် XC ဆိုင်ကယ်တစ်စီးရနိုင်သည်။ ဒီမှာကျွန်တော့်ရဲ့ဘတ်ဂျက် XC စက်ဘီးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာကလက်တွေချပြီးတာယာတွေကိုပြောင်းလဲတာပါပဲ။ ကျွန်တော့် overdrive ကိုပိုပြီးကျယ်ပြန်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တင်ထားတဲ့တာယာတွေကိုချလိုက်တဲ့အခါသူကလုံးဝကွဲပြားတဲ့စက်ဘီးလိုခံစားခဲ့ရတယ်။
ငါဒီတာယာတွေကိုအောက်ပိုင်းဖိအားနဲ့လည်ပတ်နိုင်စေတယ်၊ ​​အဲဒါကသူတို့ကိုပိုပြီးရှုပ်ထွေးစေပြီးခွင့်လွှတ်ခဲ့တယ်။ သို့သော်ထိုမျှမကသေးပါ။ ငါ၏ကွင်းဆက်နေရာတစ်နေရာလုံး၌ clapped အားလုံးမြည်သံကိုသင်တို့ကြားပါသလား, တကယ်တော့ဒါဟာအများအပြား dropand ခုန်အပေါ်လုံးဝချွတ်လာ၏။
ဤအရာကိုဖြေရှင်းရန်ပြguideနာကိုဖယ်ရှားပေးသည့်ကွင်းဆက်လမ်းညွှန်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ဒီစက်ဘီးလောက်လွယ်လွယ်ကူကူမောင်းနှင်နိုင်သည့်သင်၏မောင်းနှင်မှုကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းထက်သင့်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဤစက်ဘီးကိုတတ်နိုင်သမျှဝေးဝေးရရန်အစပြုသူဖြစ်ပါကခြေနင်းများနှင့်ခက်ရင်းကိုဤကဲ့သို့သောအရာသို့လည်းမြှင့်တင်နိုင်သည်။
၎င်းထက် ကျော်လွန်၍ သွားခြင်းသည်စီးပွားရေးကျမည်မဟုတ်ပါ။ လျောက်ပတ်သောလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်သည်၎င်း၏တန်ဖိုးကိုကောင်းစွာထိန်းထားနိုင်မည်ဆိုပါက၎င်းကိုရောင်းချခြင်းနှင့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုလုံးကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းကပိုကောင်းသည်။ နောက်ဆုံးသင်၌စက်ဘီးတစ်စီးရှိပြီးနှင့်၎င်းစမ်းသပ်မှုအချို့မအောင်မြင်ကြောင်းတွေ့ရှိပါကဤဆောင်းပါးမှသင်အကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင့်အတွက်လက်ရှိအလုပ်ဖြစ်ပြီးသင်နှစ်သက်သည်ဆိုပါကဖျက်စီးခြင်းကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်သင့်ကိုတားဆီးနေသည်ဟုခံစားရလျှင်ယခုတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေရန်ကိရိယာများရှိသည်။
သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသူများ၏အကူအညီဖြင့်စုဝေးခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်တောင်းဆိုနိုင်သည့်အခြားအဆင့်မြှင့်တင်မှုများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ပါ။ မှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်ဖြေဆိုရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါမည်။ ဒါကြောင့်အစပြုသူစက်ဘီးတစ်စီးရှာပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကမင်းရဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုရောင်းပြီးတစ်မိုင်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးကြီးတဲ့ငွေကြေးဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရတာကတစ်နှစ်လောက်ပဲကွာတာပေါ့။ ဒါကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီနေ့ငါ့ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်တစ်ခါပြန်လာတာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1. 24K ရွှေအစွန်းရောက်တောင်တန်းစက်ဘီး- ဒေါ်လာ ၁ သန်း။ Hugh Power မှဒီဇိုင်းဆွဲပြီးစတင်ခဲ့သည်ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးစက်ဘီးဒေါ်လာသန်းကုန်ကျဈေးကွက်ထဲမှာ!
တောင်ထိပ်ဆိုင်ကယ်အမှတ်တံဆိပ် ၅ ခုကဘာတွေလဲ။
Theထိပ်တန်းတောင်တက်စက်ဘီးတံဆိပ် ၅ ခုငါအကြံပြုသောနေသောခေါင်းစဉ်: Giantစက်ဘီး, Trek, အထူးစက်ဘီးအစိတ်အပိုင်းများ Inc ကို, Santa Cruzစက်ဘီးနှင့် Cannondale ။ ဤရွေ့ကားကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏စက်ဘီးအချိန်ကြာမြင့်စွာလှည့်ပတ်ခဲ့ကြသူမြား, လမ်းကြောင်းအပေါ်အကြီးအပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရှိသည်, ပင်၏သမိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်တောင်တက်စက်ဘီးစီးခြင်းသူ့ဟာသူ
ပိုကောင်းတဲ့ Giant သို့မဟုတ် Trek ဘယ်ဟာလဲ
ယေဘုယျအားဖြင့်iantရာထက်စျေးကြီးသည်ခြေကျင်ခရီး။ သူတို့ဘယ်မှာထုတ်လုပ်သလဲ၊iantရာ၎င်း၏စက်ဘီး၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုအနိမ့်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ခြေကျင်ခရီးစက်ဘီးများသည်ဘတ်ဂျက်နှင့်အဆင်ပြေစွာစီးနင်းနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့၏စက်ဘီးများသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၀ ယ်ရန် ပို၍ စျေးကြီးသည်။
အနိမ့်ထောက်ပံ့ရေးနှင့်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားစက်ဘီးရှားပါးမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စားသုံးသူများ၏ ဦး စားပေးမှုများ၊ ဦး စားပေးမှုများနှင့်တန်ဖိုးများသည်စက်မှုလုပ်ငန်းများပြန်လည်ပြောင်းလဲနေသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ supply-chain နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်စက်ဘီးစီးခြင်းကူးစက်ရောဂါကြောင့်နှင့်အခြားပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ။20ပြီ ၂၀ 2021
Schwinn သို့မဟုတ် Mongoose ကဘာလဲ။
စက်ဘီးအရည်အသွေး & တာရှည်ခံ
ယေဘုယျအားဖြင့်, နှစ် ဦး စလုံးငရုတ်သီးစိမ်းနှင့်Schwinnစက်ဘီးများသည်လူမီနီယံဘောင်ကိုအသုံးပြုသည်။ဘာတွေလဲစျေးနှုန်းချိုသာပြီးဈေးသက်သာသည်။ အောင်မြင်သူငရုတ်သီးစိမ်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်လူမီနီယံဘောင်တွေကြောင့်လူသိများတာထက်အနည်းငယ်ပိုစျေးကြီးတယ်Schwinnပိုပြီးကြာရှည်ခံဖြစ်လေ့, ဘောင်။
iantရာဝင်ငွေအားဖြင့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစက်ဘီးထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီသည်စက်ဘီးကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နာမည်ဖြင့်ရောင်းချပြီးအဓိကကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ထုတ်လုပ်သည်ခြေကျင်ခရီး, Scott နှင့် Colnago ။သြဂုတ် ၃၀ ၂၀၁၃
Isပိုက်ဆံရကျိုးနပ် Trek? ဟုတ်တယ်၊စက်ဘီးစီးခရီးဖြစ်ကြသည်ပိုက်ဆံရကျိုးနပ်။ခြေကျင်ခရီးသူတို့ရဲ့ high-end နည်းပညာများထုပ်ပိုးစက်ဘီးသူတို့ရဲ့တည်ဆောက်စက်ဘီးအရည်အသွေးမြင့်အလူမီနီယမ်နှင့်ကာဗွန်ဘောင်များပတ် ၀ န်းကျင်ရှိပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော Shimano နှင့် SRAM အစိတ်အပိုင်းများကိုသာအသုံးပြုပါ။23ပြီ ၂၃ 2021
သက်သောင့်သက်သာရှိသည့်စက်ဘီးများကိုမည်သည့်အသက်အရွယ်နှင့်ကျားမမရွေးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤစက်ဘီးအမျိုးအစား၏ထိပ်ပြွန်သည်အခြားစက်ဘီးများထက်တိုတောင်းသည်။ ထို့ကြောင့်မြင်းစီးသူရဲများသည်ခြေထောက်များကိုမြေပေါ်သို့အလွယ်တကူနေရာချနိုင်သည်။ ထိုင်ခုံ၏အမြင့်ကိုလည်းသင်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လူများသည်သက်သောင့်သက်သာစက်ဘီးကိုထိန်းချုပ်ရန် ပို၍ လွယ်ကူသည်။